Ku Saabsan – Qaamuus
Hoy / Ku Saabsan
Qofka wax qoraya ama akhrinayaa kama maarmo tixraac uu ugu noqdo macnaha iyo adeegsiga uu erey gaar ahi leeyahay. In badan ayaa ay u baahdaan qaab fudud oo ay ku baaraan erey macnihiis, erayo u dhigma erey, ama in ay ka hubsadaan habboonaanta erey ay meel cayiman u adeegsanayaan.
Qaamuusku waa tubta ugu sahlan, waa keydka hodmiya ereyada af leeyahay, kobciya ereyada uu qof yaqaan, haga adeegsiga erey, qurxiya oo tanaadiya qoraallada xulka ah. Afafka dunida looga hadlo ee dadkoodu u hagar baxaan waxa ay leeyihiin sad waafi ah oo qaamuusyo ah; qaamuusyo kala geddisan, kala ujeeddo ah, kala nuxur iyo nafci badan.
Afka Soomaaligu waxa uu ka mid yahay afafka ugu yar ee dadkiisu aanay ugu hagar bixin in ku filan. Waa af hodan ah oo haddana faqri ah. Waa af aan lahayn qaamuusyo badan oo tanaadiya. Waa af dadkiisa dhawraya oo aan waqti dheer helin dadaal dawladeed si la mid ah sida aysan dadkiisuba u helin. Waa af aan nasiib u yeelan dadaal-shaqsiyeed badan oo u dhigma heerkiisa af ahaaneed, hankiisa waaritaan iyo hilowgiisa casriyayneed.
Isaga oo aan weli cagta soo dhigin sallaanka koowaad ee kaalimaha afafka dadkoodu u hagar baxeen, ayaa caalamkii isbeddelay, xilli ay sii idlaanayso xaanshidu, khatar badani ka soo fool leedahay ayaa la galay oo la sii tiimbanayaa. Afaf badan dadkoodu mar kale ayaa ay u hagar baxeen oo qaamuusyo lagu adeegsado telefoonnada gacanta iyo baraha internet-yada ayaa ay samaysteen, mar kale ayaana ay u qireen afkooda in ay u yihiin muwaadiniin u daacad ah. Af Soomaaliguse weli waa halkiisii.
Bahda Garanuug waxaa ay garwaaqsadeen baahi loo qabo qaamuus Soomaaliyeed oo hodan ah, baraha internetka iyo talefoonanda gacantana (application) lagu adeegsan karo. Sidaas awgeedna waxa ay bilaabeen hirgelinta hankaas cid waliba ay qirayso ahmiyadda uu leeyahay iyo sida uu u yahay xil waajib ah oo aqoonyahanka saaran.
Qaamuuskani waxa uu ku salaysnaan doonaa qaamuusyada guud ee diyaarsan, sida Qaamuuska Af-Soomaaliga ee Yaasiin C. Keenadiid (1976), iyo Qaamuuska Af-Soomaaliga ee Annarita Puglielli iyo Cabdalla Cumar Mansuur (2012), iyo Soo Maal: Qaamuus AfSoomaali (2013), Aadan Xasan Aadan (tif.), iyo kuwa maaddooyinka gaarka ah ku saabsan, sida caafimaadka, sayniska, iwm.
Heerka koowaad, waxa aanu diyaarinaynaa dhammaan ereyada ku jira Qaamuuska Keenadiid (Alle ha u naxariisto e). Ka dibna erey kasta waxa aanu xogtiisa ka soo uruurinaynaa qaamuusyada kale ee kor ku xusan.
Waa mashruuc u baahan waqti iyo kharash farabadan, waana hawl iskaa-wax-u-qabso ah. Waa hawl mudan in cidda gacanta ku haysa lagala qeyb qaato, haddii ay tahay talo iyo haddii ay tahay dhaqaalaba.
Bahda Garanuug waxa ay kugu dhiirrigelinayaan ka qeyb qaadashada dhaqaale ee hawshaan muhiimka ah. Wixii aad ku deeqdid hor Alle ayaa aad geysatay, afkaaga ayaa aad wax ku tartay, ku tanaasiday, kuna tayaysay. Waxa aad nagala soo xidhiidhi kartaa qaamuus@garanuug.com.
Ku mahadsanid taageeradaada.